Moqups: Atụmatụ, Kere, Prototype, na jikọọ ọnụ na Wayafụfụ na Mockups zuru ezu | Martech Zone
Otu n'ime ọrụ na -atọ ụtọ na afọ ojuju nke m nwere na -arụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa maka ikpo okwu SaaS. Ndị mmadụ na -eleda usoro a chọrọ iji mee atụmatụ nke ọma, chepụta, ụdị na imekọ ihe ọnụ na obere mgbanwe onye ọrụ anya.
Iji mee atụmatụ atụmatụ kacha nta ma ọ bụ mgbanwe nke onye ọrụ, m ga-agba ndị ọrụ nọ n'elu ikpo okwu ajụjụ ọnụ ka ha si eji ma na-emekọrịta ihe n'elu ikpo okwu, gbaa ndị ahịa nwere ajụjụ ọnụ ajụjụ maka otu ha ga-esi jiri atụmatụ ahụ, kwurịtara nhọrọ n'etiti ndị otu ihe owuwu ụlọ na n'ihu- mechie ndị nrụpụta na ohere, wee zụlite ma nwalee ụdị ngosi. Usoro a nwere ike were ọnwa ole na ole tupu eriri waya gafere na nrụpụta. Ka a na -emepụta ya, m ga -ejikwa nseta ihuenyo maka akwụkwọ na ire ngwaahịa.
Inwe ikpo okwu iji zụlite, kerịta ma jikọọ ọnụ na ịkwa emo dị oke mkpa. Ọ dị m ka ya bụrụ na anyị ga -enwe ikpo okwu dị mfe ma na -agbanwe agbanwe Moqups. Site na ịkwa emo na ngwa waya dị ka Moqups, ndị otu gị nwere ike:
Mee ngwangwa usoro okike gị - Na -arụ ọrụ n'ime otu ihe okike iji mee ka ndị otu gị lekwasị anya.
Soro ndị niile na -etinye ego - Ndị na -ahụ maka ngwaahịa, ndị nyocha azụmaahịa, ndị na -ahụ maka sistemụ, ndị na -ese ihe na ndị mmepe - na -ewulite nkwekọrịta ma na -ekwurịta okwu nke ọma.
Na -arụ ọrụ n'ime igwe ojii - oge ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla - na -enweghị nsogbu ibugote na nbudata faịlụ.
Ka anyị mee njem ngwa ngwa nke Moqups.
Kere - Jiri anya gị hụ echiche
Chee echiche, nwalee ma kwado echiche gị site na iji waya ngwa ngwa na ịkwa emo zuru ezu. Moqups na-enyere azụmahịa gị aka inyocha na ikwughachi ka ndị otu gị na-ewulite ọkụ-na-aga n'enweghị nsogbu site na lo-fi gaa hi-fi ka ọrụ gị na-aga n'ihu.
Atụmatụ - Kụzie Echiche Gị
Weghara echiche ma jiri ngwaọrụ eserese eserese ọkachamara anyị wepụta ọrụ gị. Moqups na -enyekwara gị aka ịmepụta maapụ saịtị, ọwa mmiri, bọọdụ akụkọ - ma wụsa elu n'etiti eserese na eserese iji mee ka ọrụ gị na -agakọ.
Prototype - Gosipụta Ọrụ Gị
Mepụta ihe nlere anya na -arụ ọrụ site na ịgbakwunye mmekọrịta na atụmatụ gị. Moqups na-enye ndị ọrụ ohere ịme ahụmịhe onye ọrụ, kpughee ihe zoro ezo, chọta njedebe nwụrụ anwụ, wee nweta akara ikpeazụ site n'aka ndị niile nwere ego tupu itinye ego na mmepe.
Na-arụkọ ọrụ-Na-ekwurịta okwu na ozugbo
Debe mmadụ niile n'otu ibe, na -enye nzaghachi n'oge ọ bụla nke usoro nhazi. Nụrụ olu niile, tulee nhọrọ niile-ma guzobe nkwekọrịta-site na idezi ya ozugbo yana ịza ajụjụ ozugbo.
Moqups nwere akụrụngwa gburugburu ebe obibi n'ime otu imewe, gụnyere:
Dọrọ na dobe ihe -Ngwa ngwa na ngwa ngwa site n'ọbá akwụkwọ sara mbara nke wijetị na ụdị mara mma.
Stencils dị njikere iji -Họrọ site na ngwa stencil agbakwunyere maka ngwa mkpanaka na imewe weebụ-gụnyere iOS, Android na Bootstrap.
Ụlọ ọba akwụkwọ -Ọbá akwụkwọ wuru n'ime ya nwere puku kwuru puku Icon Setịpụrụ, ma ọ bụ họrọ site na Font Awesome, Design Design, na Hawcons.
Bubata Foto -Bulite ihe ejikere, wee tụgharịa ha ngwa ngwa ka ọ bụrụ ihe ngosi mmekọrịta.
Ihe ndezi - Jiri ihe ndị nwere ọgụgụ isi na ndị siri ike megharịa, tụgharịa, dozie na hazie ihe - ma ọ bụ gbanwee ọtụtụ ihe na otu. Nnukwu-dezie, nyegharịa aha, mkpọchi na ihe otu. Megharịa ma ọ bụ megharịa na ọtụtụ ọkwa. Chọpụta ihe ngwa ngwa, gafee n'etiti ndị akwụrụ, ma tụgharịa ọhụhụ - niile n'ime Panel Ndepụta. Mee nhazi nkenke na grid, ndị na-achị achị, ntụzịaka omenala, snap-to-grid na ngwa nhazi ngwa ngwa. Ọkwa, na -enweghị ịdị mma, yana mbugharị vectorial.
Ọbá akwụkwọ Font - Họrọ site na narị narị nhọrọ font na Google Fonts agbakwunyere.
Nchịkọta Ihe - Njikwa Peeji dị ike, na -agbanwe agbanwe. Dọrọ na dobe ibe iji hazigharịa ha ngwa ngwa - ma ọ bụ hazie ha n'ime folda. Zoo ibe ma ọ bụ folda - ndị na -adịchabeghị mma maka oge mbụ - jiri obere ọpịpị nke òké.
Peeji Master - Chekwaa oge site na ijiri ibe Master, ma tinye mgbanwe ọ bụla na ibe niile metụtara.
Atlassian - Moqups nwere nkwado dị maka sava Confluence, Jira Server, Cloud Confluence na Jira Cloud.
Ihe karịrị nde mmadụ abụọ na -eji Moqups ugbu a maka ngwa na imepụta ihe ntanetị na ịkpụgharị waya!
Mepụta akaụntụ Moqups efu
Ngosi: Abụ m mmekọ Moqups m na -ejikwa njikọ m n'ime edemede a niile.
Tags: ngwa imewengwa ịme anwansịmmekotaaghụghọesereseagba mmiriihe ngosimokwpsnjikwa ngwaahịaihe omumaịme anwansịbọọdụ akụkọuiahụmahụ onye ọrụonye ọrụ interfaceanyaimewe ngwa weebụnhazi weebụwaya isi